न्युज ब्रेक Archives - Page 546 of 549 - SaighaliKhabar.com | सैघालीखबर डट कम
पार्किङ गरी राखेको बसमा आगजनी
दाङ जेठ १६ । तुलसिपुरमा र्पािर्कङ गरी राखेको बसमा एक्कासी आगलागी भएको छ । तुलसिपुर अमेलिया सडक खण्डको रेडियो तुल्सीपुर नजिकै पार्किङ गरेको ना ३ ख १४५१ नम्वरको बसमा आगलागि भएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त घटनाका बारेमा थप विवरण आउन बाकी रहेको छ । फोटो सर्मिला डि.सीको फेसबुक बाट...
तपाईको उम्मेद्वारी किन ? करिव –करिव २० वर्ष पछि हुन लागिरहेका स्थानिय तहको निर्वाचनमा समान युवा सहभागितको विकास गर्न मेरो उम्मेद्वारी हो । ‘ युवाहरु भविष्यका कर्णधार मात्रै होइन । वर्तमान हिस्सेदार पनि रहेकाले युवाहरुको अधिकार सुनिश्चितका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो । युवाहरु अवसर निति निर्माण तथा नेतृत्व तह वाट विमुख...
घरदैलो तथा चुनावी अभियानमा माओवादी केन्द्र
जनक नेपाली दाङ,जेठ १६ नेकपा माओवादी केन्द्र दाङले जिल्लाका सवै जसो गाँउपालीका,नगरपालीका तथा उप– महानगरपालीकामा चुनावी कार्याक्रम तथा घरदैलो कार्यक्रमहरु जारी राखेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरुमा उमेद्वारहरुको टुङ्गो लागिसकेकोले सवै तहहरुमा उमेद्वारहरुले घरदैलो कार्यक्रमहरु गरीरहेको निर्वाचन परीचालन कमिटिका जिल्ला संयोजक निर्मल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । माओवादी केन्द्र घोराही उप–महानगरपालीकाको...
सन्र्दभ ः गणतन्त्र दिवस ‘अझै बिझाउछन गोलीका छर्राहरुले …’
गिरिराज नेपाली घोराही । मुलुकले द्वन्द्वकालिन जर–जर अवस्थावाट शान्ती पाएको करिव एक दशक वितिसक्यो । तर अझै मुुलुकले दिगो शान्ती र समृद्धिको निकास पाउन सकेको छैन । द्वन्द्वकालिन समयमा वेपता , घाईते अपाङ र घरपरिवार विहिन भएका व्यक्तिहरु मात्रै होईन । समृद्धि र समुनत नेपालको परिकल्पना गरेका वसेका अधिकार विहिन नागरिकहरुले पनि...
सरकारद्धारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब
काठमाण्डौ ,जेष्ठ १५ निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २१ दशमलव ९ प्रतिशतले आकार बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७४र७५ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्...
शान्ती दिप प्रज्वलन
जेष्ठ १५ , दाङ । दशांै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सोमवार घोराहीको तुलसीपुर चोकमा शान्ती दिप प्रज्वलन गरिएको छ । स्थानिय शान्ती समिति दाङको आयोजनामा दिप प्रज्वलन गरिएको हो । स्थानिय शान्ती समिति दाङका संयोजक नेत्र प्रकाश पाण्डेको अध्यक्षता एंव पं्रमुख जिल्ला अधिकार मेघनाथ काफ्लेको प्रमुख आतिथ्यताका दिप प्रज्वलन गरिएको थियो ।...
जनक नेपाली दाङ जेठ १५ । ११ औं सत्याग्रहमा बस्न दाङ आउनु भएका डा. गोविन्द केसीले अनसन स्थगित गर्नु भएको छ । आउँदो शुक्रवार सम्म अनसन स्थगित गर्नुभएको हो । दाङमा स्थापना गर्ने भनिएको मेडिकल कलेजको काम मन्त्री परिषदको सामाजिक समिति मार्फत अगाडी बढेपछि अनशन स्थगित गर्नु भएको हो । यद्यपी...
दाङ, जेठ १५ । दाङमा हतियार पड्किदा एकजना नेपाली सेनाका हवल्दारको मृत्यु भएको छ । दाङको घोराही उप–महानगरपालिका वडा नं. १० निवासी किसन थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी धिरज प्रताप सिंहले जानकारी दिनुभयो । सोमवार दिउँसो साढे २ बजेतिर चुनावी सुरक्षाको लागि गाडिमा चढेर गस्तिमा जाँदैगर्दा हतियार पड्किएर थापालाई...
चितवनमा १७ गतेसम्म मत गणना रोकियो
चितवन,जेठ १५ । चितवनमा मत गणना कार्य १७ गतेसम्म रोकिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । आयोगको आज बसेको वैठकले निर्वाचन आयोगका सहन्याधिवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति बनाएको आयोगका प्रवत्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । समितिमा गृहमन्त्रालयका एक सचिव र एक...
डा.केसीको सत्याग्रहमा माओवादी केन्द्रको सर्मथन
दाङ,जेठ १५ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनसनका लागि दाङ आउनुभएका डा. गोविन्द केसीको अभियानप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले एक्यबद्धता जनाएको छ । माओवादी दाङका इञ्चार्ज एवं घोराही उपमहानगरपालिका मेयर पदका उम्मेदवार जीवन गौतम र उपमेयरका उम्मेदवार सिता चौधरीले भेट गरी एक्येबद्धता जनाउनुभएको हो । अस्पतालको स्तरबृद्धि गर्नेदेखि बिगत...